Maxeey ka yiraahdeen wasiiraddii is casilay tan iyo markii lagala noqday kalsoonida? | Somaliska
Maxeey ka yiraahdeen wasiiraddii is casilay tan iyo markii lagala noqday kalsoonida?
Wasiiradii dhawaan kalsoonida lagala noqday ee dalkaan Iswiidhan ayaa saxaafadda la hadlay tan iyo markii xilalka ay iska casileen. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Anders Ygeman, ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan amuurtaas wuxuuna tilmaamay in ay qasab aheyd xil ka degistiisi,
“Waxaa ay aheyd arrin laga xumaado mana muuqan fursad kale oo banaaneyd marka la eego sida xaal ahaa, afarta xisbi ee xulufadda ah iyo xisbiga SD waxay baarlamaanka keenayaan in loo codeeyo in kalsoonida layga qaado, taasna waxay carqalad ku tahay suurta galnimada in aan wasiir sii ahaado”, ayuu yiri Ygeman.
Mar wax laga weeydiiyey in ogolayahay inuu qaato qaladkiisa ama uu galay ayuu kaga jawaabay arrintu u taalo dadyowga kale oo ay ja doodi karaan balse, uu jeclaan lahaa in amaanka qaranka laga horeysiiyo danaha siyaasadeed ee gaarka ah, waa sida uu hadalka u dhigaye..
Dhinaca kale waxaa iyadana aragtideeda ka dhiibatay mar ay warfidiyeenada la hadleeysay wasiiradii hore ee is dhexgalka iyo kaabayasha dowladdda Anna Johansson ayaa sheegtay in ay ka xun tahay falkii dhacay.m balse tibaaxday in ay tahay wax laga xumaado faddeexaddii hareeysay mid ka mid ah hey’adaha dowladda ee ay iyadu mas’uul ka haeyd saas oo ay tahay intii ay awooday wax qabatay.
“Waxan diyaar u ahaa in aan sii wado hawlahayga oo aan qaato masuuliyadayda aniga oo baaris ku sameeyn lahaa wixii dhacay. Balse marka xaaladdan ay timi oo la sheegay in kalsoonida baarlamaanka laygala noqonayo,suuragalna iima noqon in aan sii joogo”, ayey tiri Johansson.
Waa hadalkii ugu horeeyey ee wasiiradan dhiiban tan iyo markii kalsoonida ay kala noqdeen xisbiyada isbaheeystay ee afarta ah iyo xisbiga xagjirka ah ee SD, xisbyadan ayaa ku adkeeysanya ineey xilka ka dego wasiirkii gaashaandhiga Peter eter Hultqvist oo isaga weli xilkiisa haya.
Ra’iisal wasaaraha dalkan ayaa shalay kulan uu saxaafada iskugu yeeshay ku sheegay in xilka ay ka dageen wasiiradii arrimaha gudaha iyo isdhexgalka iyo kaabeyaasha dalka. Arrimahan ayaa salka ku haya ka dib markii ay soo baxeen fadeexo la xirriirta sida waaxda gaadiidka dalka ay u maareeysay xogta iyo siraha dalka ee ay ku shaqeeyaan kaabayasha, kuwaas oo qandaraas lugu siiyey shirkado ajanabi ah oo fadhiya Yurubta bari.
Askari ka tirsan ilaalada guriga raysal wasaaraha oo isdilay
Siyaasi soomaalida Iswiidhan kal hore aflagaadeeyey oo ganaax la dul dhigay